﻿ मंगलबारसम्ममा एसइईको नतिजा आउने
मंगलबारसम्ममा एसइईको नतिजा आउने
शुक्रबार १६, साउन २०७७
काठमाडौं । एसइई परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकनको नतिजा मंगलबारसम्ममा प्रकाशित हुने भएको छ।
आगामी सोमबार र मंगलबारसम्ममा एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका उपनियन्त्रक महेश्वर शर्माले जानकारी दिएका छन् । एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्नको लागि धमाधम तयारी गरिरहेको बताएइएको छ ।
‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरका अनुसार यस वर्ष चार लाख ८३ हजार विद्यार्थीको एसइई परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशित हुनेछ।
निशब्द छौं सम्पुर्ण हामी कक्षा‌ 11 का बिधार्थीहरु !! सुरुमा परीक्षाको तयारीमा थियौं, आन्तरिक मूल्यांकन हुने निर्णय अायो । त्यो सुनेपछि पढ्न छाड्यौ। 11 त त्यसै गयो 12 मा राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर 12 को किताब किनेर ल्याइयो अनि 12 को पढ्न थाल‌ियो। यो नगर्नेले आ-आफ्नो interest follow गर्न थाले। जे गरेपनि 11को तयारी गरेनन्। अहिले फेरी 11को परिक्षा हुन्छ रे !! वाह कति सम्म को‌ मजाक। धेरै कुरा किन घुमाउनु अहिले हाम्रो कलेज पनि भदौमा परीक्षा गराउने भनेर लागेको छ। 29गतेसम्म admit card लिइसक्नु पर्ने रे।हाम्रो कलेज मा हमिलाइ cours नै पडाइ सक्नु भको छैन अनि हामीले 15.20 दिन मा exm दिने ।फरि हाम्रो कलेज मा पुर्ब देखी पश्चिम् सम्म को विद्यार्थी छ्न कसरी आउन सम्भब हुन्छ र ???? तर हामीलाई केही भैहाल्यो भने कलेजले हाम्रो parents हरुलाई हाम्रो life को guarantee दिन्छ ? हावा कुरा गर्यो यिनीहरूले भन्नुहुन्छ होला, कोरोना लाग्दैन लागेपनि केही हुँदैन भन्नुहुन्छ होला। तर यथार्थ बुझ्नुहोस्। अहिले बिराटनगर, इनरुवा लगायतका ठाउँमा कोरोना virus सामुदायक स्तरमै फैलिएको जस्तो देखिन्छ। विराटनगर र इनरुवाका मान्छेहरु सयौं को संख्यामा itahari भित्रिन्छन् । फेरि एउटा प्रश्न अहिले परीक्षा गराउने स्थिति छ र ? जतिसुकै सतर्कता अपनाए पनि मानसिक डरले गर्दा अहिले परीक्षा दिन सक्दैनौं। अहिले सरहरुले पढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। ठिक छ हौसला बढाउनु भयो हामी पढ्छौ। तर 20 दिन मा हामीले कतिनै पड्नुर हाम्रो समस्या लाई मध्यनजर गर्दै परीक्षा अलि पछि समय अनुकूल भएपछि लिन आग्रह गर्दछौ । सबै निर्णय आफै बाट !! एकचोटी विद्यार्थीहरुलाई सोध्न अवश्यक ठान्नु भयो। सरकारले भदौपछि विद्यालयको अनुकुलतामा परीक्षा गराउनु भनेर आग्रह गर्यो तर साच्चैमा यो अनुकुल समय हो‌ त ?? त्यसैले भदौमा परीक्षा गराउने हो भने हामी परीक्षा दिने अवस्थामा छैनौं। सरकार र college दुवैले विद्यार्थीको मानसिक स्थिति खै बुझेको ? सन्दर्भ: Collage ko परीक्षा ठूलो हो कि विद्यार्थीको जीवन ??? जन्ता मल्टिपल कय्म्पस इटहरी #Be_free_To_give_your_opinion #question_to_college_education_system_education_minister_and_ government
निशब्द छौं सम्पुर्ण जन्ता कलेज का हामी कक्षा‌ 11 का बिधार्थीहरु !! सुरुमा परीक्षाको तयारीमा थियौं, आन्तरिक मूल्यांकन हुने निर्णय अायो । त्यो सुनेपछि पढ्न छाड्यौ। 11 त त्यसै गयो 12 मा राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर 12 को किताब किनेर ल्याइयो अनि 12 को पढ्न थाल‌ियो। यो नगर्नेले आ-आफ्नो interest follow गर्न थाले। जे गरेपनि 11को तयारी गरेनन्। अहिले फेरी 11को परिक्षा हुन्छ रे !! वाह कति सम्म को‌ मजाक। धेरै कुरा किन घुमाउनु अहिले हाम्रो कलेज पनि भदौमा परीक्षा गराउने भनेर लागेको छ। 29गतेसम्म admit card लिइसक्नु पर्ने रे।हाम्रो कलेज मा हमिलाइ cours नै पडाइ सक्नु भको छैन अनि हामीले 15.20 दिन मा exm दिने ।फरि हाम्रो कलेज मा पुर्ब देखी पश्चिम् सम्म को विद्यार्थी छ्न कसरी आउन सम्भब हुन्छ र ???? तर हामीलाई केही भैहाल्यो भने कलेजले हाम्रो parents हरुलाई हाम्रो life को guarantee दिन्छ ? हावा कुरा गर्यो यिनीहरूले भन्नुहुन्छ होला, कोरोना लाग्दैन लागेपनि केही हुँदैन भन्नुहुन्छ होला। तर यथार्थ बुझ्नुहोस्। अहिले बिराटनगर, इनरुवा लगायतका ठाउँमा कोरोना virus सामुदायक स्तरमै फैलिएको जस्तो देखिन्छ। विराटनगर र इनरुवाका मान्छेहरु सयौं को संख्यामा itahari भित्रिन्छन् । फेरि एउटा प्रश्न अहिले परीक्षा गराउने स्थिति छ र ? जतिसुकै सतर्कता अपनाए पनि मानसिक डरले गर्दा अहिले परीक्षा दिन सक्दैनौं। अहिले सरहरुले पढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। ठिक छ हौसला बढाउनु भयो हामी पढ्छौ। तर 20 दिन मा हामीले कतिनै पड्नुर हाम्रो समस्या लाई मध्यनजर गर्दै परीक्षा अलि पछि समय अनुकूल भएपछि लिन आग्रह गर्दछौ । सबै निर्णय आफै बाट !! एकचोटी विद्यार्थीहरुलाई सोध्न अवश्यक ठान्नु भयो। सरकारले भदौपछि विद्यालयको अनुकुलतामा परीक्षा गराउनु भनेर आग्रह गर्यो तर साच्चैमा यो अनुकुल समय हो‌ त ?? त्यसैले भदौमा परीक्षा गराउने हो भने हामी परीक्षा दिने अवस्थामा छैनौं। सरकार र college दुवैले विद्यार्थीको मानसिक स्थिति खै बुझेको ? सन्दर्भ: Collage ko परीक्षा ठूलो हो कि विद्यार्थीको जीवन ??? जन्ता मल्टिपल कय्म्पस इटहरी #Be_free_To_give_your_opinion #question_to_college_education_system_education_minister_and_ government
विराटनगरमा एकैदिन थपिए ४० जना कोरोना संक्रमित
जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा उदयपुरका एक युवा पक्राउ
धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए
झापाका चार पालिकामा एक साता लकडाउन
आज प्रदेश १ मा थपिए ८६ जना कोरोना संक्रमित